Ny rafitra miasa tvOS dia nahazo vaovao ihany koa tao amin'ny WWDC 2016 | Avy amin'ny mac aho
Ny tena marina dia nitranga haingana be daholo ny fampisehoana vaovao noho ny sisa amin'ireo rafitra miasa ary ny tvOS dia rafitra fiasa vaovao kokoa noho ny sisa amin'ny rafitra Apple, izay midika fa ny vaovao na ny asa misy dia afaka manatanteraka amin'ny ankapobeny. dia kely.
Tsy mila mieritreritra isika fa vitsy ny zava-baovao, ny zava-baovao dia ampy fotsiny ho an'ny fitaovana izay manatanteraka ny asany amin'ny fahalavorariana ankehitriny ary ampahany amin'ny antsipiriany izay azo nohosorana foana, ny Apple TV miaraka amin'ny tvOS dia mamorona seta tsara ary miaraka amin'ireo fiasa vaovao napetraka dia mihatsara be dia be.
Ny fisongadinan'ny zava-baovao ao amin'ny rafitra fiasa ho an'ny boaty st-top an'i Apple dia izao ananantsika izao kaonty tokana hidirana amin'ny sisa amin'ny serivisy. Inona no mety ho fidirana amin'ny HBO, Netflix, Youtube ary serivisy hafa mila fidirana, miaraka amin'ny kaonty tokana. Ity dia tsy maintsy hahita ny fomba fiasan'izy amin'ny antsipiriany kokoa, fa zavatra tena mahaliana amin'ity rafitra fiasa vaovao ity.
Ilay mpanampy manokana Siri dia nahatratra ny laharam-pahamehana tamin'ity tonon-dahatsoratra ity sy amin'ny Apple tv ary ny tvOS vaovao, ny fanatsarana dia miaraka amin'ny fampidirana bebe kokoa amin'ireo rindranasa. Ohatra fampidirina amin'ny fikarohana ao amin'ny YouTube, ankoatry ny safidy hafa.
HomeKit dia niseho koa tamin'ny zava-baovao amin'ity tvOS vaovao ity, ankehitriny dia mamela antsika hifehezana ny mari-pana ao an-trano amin'ny Apple TV amin'ny andian-taranaka iray na mampirehitra na mamono ny jiro, sns. Mazava ho azy fa mila fitaovana mifanaraka amin'ny HomeKit izy io, saingy mieritreritra izahay fa tsara ny mampiasa ny Apple TV amin'izany.
Dark Mode tonga ao amin'ny Apple TV amin'ity kinova vaovao ity ary na dia marina aza fa fanovana estetika fotsiny izy io, heverinay fa tsara ny fampiasana azy amin'ny fitaovana. Remote for iOS dia manova tanteraka ny interface Ary azonao atao ny mampiasa ny iPhone ho toy ny pad control ary milalao miaraka aminy. Ity kinova vaovao ity dia mampiasa ny accelerometer an'ny iPhone hifandraisany amin'ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra vaovao.
Amin'ny ankapobeny dia famoahana kinova vaovao misy fampiasa vaovao vitsivitsy izy ity, araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, fa ny fiasa sy ny fiasa vaovao ampiharina dia mifanaraka amin'ny Apple TV. Etsy ankilany, asongadino izany ny Apple TV an'ny taranaka fahefatra vaovao dia efa manana fantsona 1.300 ary maherin'ny 6.000 ny rindram-baovaon-tany izay miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana dia hitombo. Ny taranaka tvOS vaovao ho an'ny Apple TV 4 dia ho hita manomboka amin'ny fararano.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Nahazo vaovao tao amin'ny WWDC 2016 ihany koa ny rafitra fiasan'ny tvOS